galmudugnews.com » Safaaradda Soomaaliya ee Beijing – China oo isku badashay goob lagu caweeyo ,looguna adeego Somaliland .
Home » WARARKA » Safaaradda Soomaaliya ee Beijing – China oo isku badashay goob lagu caweeyo ,looguna adeego Somaliland . Safaaradda Soomaaliya ee Beijing – China oo isku badashay goob lagu caweeyo ,looguna adeego Somaliland . admin on
Oct 28th, 2012 //
No Comment Views 163329Galmudugnews.com – Safaaradda Soomaaliya ee Magaalada Beijing ee dalka China oo ka mid ah safaaradaha ka dhega fureysta amarada iyo fariimaha ka yimaada Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya , ayaa isku badashay sanadihii ugu dambeeyay goob lagu caweeyo , looguna adeego danaha Somaliland .
Dhismaha Safaaradda ayaa galab waliba lagu arkayaa haween ku caan ah caweyska iyo tumashada , iyadoo ilinka hore ee Safaaradda uu ku soo dhoweeyo ninka lagu magacaabo Cawaale Cali Kulane oo sheegta inuu yahay Ku-xigeenka /lataliyaha Safaaradda ,hayeeshee ku caan baxay ka ganacsiga waxyaabaha maanka-dooriya kadib markii taargooyinka diplomaasiga ee Safaaradda uu gacanta u geliyay shaqsiyaad Soomaali iyo ajnabi iskugu jira oo baabuurta taargada diplomaasiga ku xiran ku gudbiya mukhaadaraatka.
Xog badan oo aan ka helay Safaaradda , ayaa waxa ay tilmaamayaan in Cawaale oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan in dowladda cusub ka dhaqan-geliso amaradeeda Safaaradaasi , uu ku dhaqaaqay sanadkii 2010-kii dagaal gacmeed ka dhan ahaa Cabdiwaaxid Liiqliiqato oo xilligaasi loo magacaabay Xoghayaha koowaad ee Safaaradda , waxaana taa ay ka dhigtay in Safaaradda ay ka shaqaaleysiistaan shaqaale aan wadan aqoonsiga iyo magacaabidda Wasaaradda Arrimaha Dibadda , iyadoo la ogsoon yahay in Qunsulka cusub ee dowladda Soomaaliya u magacowday dhowaan wadanka China uu hadda ku sugan yahay Magaalada Beijing , kaasoo lagu magacaabo Cabdi Xaashised , hayeeshee laga horistaagay inuu gudaha u galo dhismaha Safaaradda , iyadoo Cawaale Kulane uu ku tilmaamay Decumintiyada lagu magacaabay Qunsulkaasi kuwa been-abuur ah , taasoo ay layaab iyo anshax darro diplomaasiyadeed ay ku tilmaameen saraakiisha sarsare ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda China .
Safiirka Soomaaliya ee dalka China Yuusuf ibraahim “ Dheeg” oo ku sifoobay qabyaalad iyo fulinta danaha maamulka la magac baxay Somaliland , si la mid ah Safiirada Soomaaliya ee wadamada Malaysia iyo Ruushka , ayaa waxaa laga cabsi qabaa in dhismaha Safaaradaha Beijing iyo Moscow laga dul-taago calanka maamulka Somaliland , halka Safaaradda Soomaaliya ee Malaysia ay ka dhaqan-gelisay wadankaasi Passport-ka sharci darada ah ee ay ku safraan ardayda ka timaada gobolka Waqooyi galbeed ee Soomaaliya ee la magac baxay Somaliland.
Xog rasmi ah oo la helay ayaa sheegaya in qalab ay ku deeqday dowladda China , looguna tala-galay in lagu xoojiyo qalabka idaacadda Radio Muqdisho loo weeciyay dhanka Magaalada Hargeysa , iyadoo qalabkaasi ay iskugu jiraan mowjadda FM-ka ah ee ka talaaba xuduudaha , taasoo laga dhageysan karo masaafo aad u dheer .
Howshaan qalabka looga weeciyay Muqdisho ee loo wareejiyay Magaalada Hargeysa ayaa waxaa ku lug leh Safiirka , Lataliyahiisa iyo nin sheegta Xoghayaha koowaad ee Safaaradda , kaasoo aan heysan decumint lagu magacaabay oo rasmi ah .
Danjire Yuusuf Dheeg iyo Cawaale Kulane ayaa qalabka oo sidoo kale ay ku jiraan agab lagu xoojiyo Telefishanka iyo gawaari ay ku xiran yihiin qalabka SNG ee lagu tabiyo dhacdooyinka tooska ah (Live) u weeciyay dhanka Maamulka uu hogaamiyo Axmed Siilaanyo, iyadoo qalabkaasi loo sii marsiiyay Xawaaladda Dahabshiil oo qalabkani ka qaaday Magaalada Beijing.
Warka ayaa waxa uu sheegayaa in gawaarida ay ku rakiban yihiin qalabka SNG aaney weli gaarin Magaalada Hargeysa , hayeeshee laga iibsaday Telefishan cusub oo dhowaan hawada soo gali doona oo saldhiggiisu noqon doono Magaalada Djibouti .
Laba todobaad kahor ayey aheyd markii Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo uu xarigga ka jaray qalab uu sheegay in dowladdiisu ay heshay , taasoo xoojinaya maqalka idaacadda Hargeysa oo markii hore aan laga wada maqli jirin qaar ka mid ah xaafadaha Magaaladaasi .
W/qortay : Sacdiyo Muuse “ Magool”
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21011 hitsContact US - 19639 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15736 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15059 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13934 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13870 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13817 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13297 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11771 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11739 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11715 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11517 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11503 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11350 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11167 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11125 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11052 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11036 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10724 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10349 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10236 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10143 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10009 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9912 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9773 hits Home About